သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ | Mg Ogga's Notes
ကမ္ဘာမြေစိမ်းလန်းစေဖို့ အတွေးတွေ အရေးတွေ
Holistic ဆိုတာကို စကြားဖူးခဲ့တာ ကျွန်တော် ရဲဘော်ရဲဘက်ကြီး မိရွှေပ စပြောရာမှ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်း သင်တန်းတွေ တတ်လာတော့တယ် ဒီစကားလုံးကို ကြားရပြန်သည်။ holistic holistic ဘာလဲဟ holistic။ Holistic ကို မြန်မာလို ဥသုံ လို့ ခရစ်ယာန်ဆရာတွေက ပြန်ကြသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာတွေနဲ့ ပိုရင်းနီုးသည့် လုံးစုံ ဆိုသည်စကားလုံးကို ပိုကြိုက်သည်။ ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရင် တစ်ဘက်က ကောင်းပြီး တစ်ဘက်ကဆိုး ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘက်ပေါင်းစုံ ထောင့်ပေါင်းစုံက ကြည်သင့်သည် မြင်သင့်သည် ဤသည် ကို holistic view ဟုခေါ်သည်။ ဥပမာ ရွာတစ်ရွာမှာ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဆောက်မယ် ဆိုပါစို့ ကျောင်း ဆောက်ရတာ ရွာက ကလေးတွေ…
June 26, 2013 in ဘာသာရေးရာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ, ဆောင်းပါး.
ပြန်ရေးရမဲ့ အင်းလေး ရာဇဝင်
တောင်တန်းတွေဝန်းရံ ပင်လယ်အသွင်သဏ္ဍန်နဲ့ ရွာ (၄) ရွာ ရေပေါ်တင်လို့ အင်းလေးရွာ အမည်တွင် နောင်အခါ “အင်းလေး” လာသူတွေဘ၀င်အေးရ ကဗျာတွေစာတွေရေးကြနဲ့ ရေပေါ်ဈေးမှာပျော် ခြေကလေးနဲ့လှေလှော်လို့ ဖောင်တော်ဦးကိုမျှော်ဖူး လာသူတွေ ကြည်နူးလို့ အသွင်ထူးစေတာက သဘာဝ ဘ၀င်မြူးစေတာက ထာဝရ ကြည်နူး ပဿဒဖြစ်ရေး အင်းသားဘ၀ဖြစ်ရတဲ့ငါ ဒေသအရေးစိတ်အေးစွာနဲ့ ဟိုစဉ်ကအတွေး ပြန်တွေးရင်းလွမ်းခဲ့ရ ကန်အင်းလေး သတင်းက ဇရာဆိုတဲ့ အဆင်းမတွေ့ရပေမဲ့ မမြဲခြင်းဆိုတဲ့ အနိစ္စ ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ ဒုက္ခကို ဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ မြင်ကွင်းမလှပတာတွေက ပွင့်လင်းစွာတင်ပြရရင် သာယာတယ်ဆိုတဲ့ အင်းလေး ပြန်ပြေးလို့ကြည့်ရင် ရေစပ်မှာ ရွာတစ်ရာမက ရေပေါ်မှာ ရွာများစွာ ၀မ်းရေးကိုရှာ ကိုတံငါ ရေလုပ်သား လယ်သမားနဲ့ ကုန်သည် လက်မှုမှာ တွင်ကျယ် ကျွန်းမျှောခြံစိုက် ကြံတွေ ကြိတ်လို့…
June 24, 2013 in ကဗျာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ.
ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီးတဲ့ အမိ အဖတို့ရဲ့ အသွေးအသားတို့ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေတဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် တောက်ပခဲ့တဲ့ မီးအိမ်ရှင် သတို့သမီး။ တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ ရင်နင့်သည်းချာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဝေဆာခဲ့တဲ့ သတို့သမီး။ ဘယ်ဘက်က တစ်ဆုပ်ကြဲ ညာဘက်က တစ်လှည်း မမျှော်လင့်ဘဲ သုံးတန်စေတနာ ပြတ်သားခဲ့တဲ့ ဂရုဏာရှင် သတို့သမီး။ ကြွေးသစ်တို့ အတိုးချရင်း ကြွေးဟောင်းကို ဆပ်နေတဲ့ သူကျေးဇူးကို အဖိုးမဖြတ်တန်ဖိုးတက်စေတဲ့ လမ်းပြရှေ့ဆောင် သတို့သမီး။ ရာဇ၀င်များရဲ့ ခမ်းနားတဲ့ သတို့သမီးရေ…… မိဘမေတ္တာငတ် အမွေဖြတ်ခံရတဲ့ အခါ ထားဆဲ သစ္စာ တည်တံ့မှာလား ထားဆဲ့ မေတ္တာ တည်ရှိအုန်းမလား စိုးရိမ်လို့သားကွယ်။ အစိမ်းရောင် ဘက်တော်သား ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း ကိုသိန်းစိုး(သိုးစိမ်း) မြစ်ဆုံ ရောက်ခဲ့ စဉ်က ခံစားရေးဖွဲ့ထားတာကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
February 2, 2010 in ကဗျာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ.
သူဟာမြေနိမ့်ပိုင်း ဒေသမှာ မွေးမြူရေးခြံတစ်ခြံပိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီခြံဟာ သူရဲ့ဘ၀ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသားနဲ့ မိန်းမဆုံးရှုံးသွားပြီးတဲ့ အခါမှာ လူသူကင်းမဲ့တဲ့ ဒီနေရာမှာ သူရဲ့သိုးအုပ်နဲ့ ခွေးလေးကိုခေါ်ပြီး ဆိတ်ငြိမ်စွာ နေထိုင်လာခဲ့တယ်။ သူအမြင်အရ ဒီဒေသကြီးဟာ သစ်ပင်ကင်းမဲ့မှုကြောင့် သေခါနီးဖြစ်နေပြီ သူဆီမှာ ဒီဒေသကြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ဖို့ထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်မရှိတော့ဘူး။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကျွန်တော်က အနာဂတ်ကိုစဉ်စားရင် ကျွန်တော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပက်သတ်တဲ့ (သို့) ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်စာပျော်ရွှင်မှု အတွက်ပဲစဉ်းစားတတ်တယ်။ သူကိုကျွန်တော်က နောင်နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်ဆိုရင် ၀က်သစ်ချပင် တစ်သောင်းဟာ အရမ်းကိုလှပနေမှာပဲ လို့ပြောမိတယ်။ သူက ဘုရားသခင်သာ သူကိုနောက်ထပ် အနှစ် ၃၀ သာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်အပင်ပေါင်းများစွာ စိုက်အုံးမယ် အခုစိုက်ခဲ့တဲ့ သစ်ပင် ၁သန်းဟာ ပင်လယ်ထဲ ကျသွားတဲ့ ရေချိုတစ်စက်လောက်ပဲရှိမယ်တဲ့။
January 28, 2010 in ဝတ္ထုတို, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ.